World News – Page 17 – Chin World News
World News January 6, 2019
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း Sichuan ပြည်နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ Yangsi ကျေးရွာဟာလည်း အာရှရဲထူးဆန်းဖွယ် ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လူပုမျိုးနွယ်စုများစွာ တည်ရှိနေတဲ့ အချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘာကြောင့်ဒီဒီလို လူပုများစွာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပညာရှင်ရာပညာရှင်များစွာ က ခုချိန်ထိ တိကျတဲ့အဖြေကိုပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Yangsi ကျေးရွာဟာ မြို့ပြနဲ့အလွန်ဝေးကွာတဲ့ အရပ်မှာ…
Egypt Cozah Nih Zeidah A Chim Zeidah Antuah Lai?
Egypt ram Cairo myo leng ah bomapuah ruangahapuah tu an si ko tiah lunghrinh mi minung 40 hna cu an tlaih hna i an thah hna. December 28 ah khan Cairo…
အထူးကုဆရာဝန်ရဲ့လည်ပင်းကို ဓားထောက်ပြီးငွေတောင်းသူကို ပတ်ဝန်းကျင်က ထိုးကြိတ်ဖမ်းဆီး
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ဆေးခန်း၌ထိုင်နေစဉ် ဓားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ပြီးငွေတောင်းယူခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်၊ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်နေ စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာထွယ်လု၊ (၄၆)နှစ်သည် ၎င်းနေအိမ်ရှေ့ဆေးခန်း၌ တစ်ဦးတည်းရှိနေစဉ် ဆမ်မွန်း၊ (၅၂)နှစ်ရောက်ရှိလာပြီးဒေါက်တာထွယ်လု၏ လည်ပင်းကိုဓားဖြင့်ထောက်ကာ ပိုက်ဆံတောင်းယူခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ ဓားထောက်ပိုက်ဆံတောင်းယူနေချိန်တွင် အိမ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိရပ်ကွက်နေပြည်သူများ ရောက်ရှိလာပြီး ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ကာဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ ဒေါက်တာထွယ်လုတစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာ သူကဓားထောက်ပြီးပိုက်ဆံတောင်းတာကို…
ရင်သားသေး လို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ (ယောင်္ကျားလေးများ မဖတ်ရန်)]
မိန်းကလေး တွေအတွက် ရင်သားအလှဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ ယောင်္ကျားတွေအတွက်လား။ အဲဒီလိုတွေးလို့လဲ မရပြန်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေး ပီသတယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။ ဒါပင်မဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သား ကသေးခဲ့ရင်ကောင်း ကောင်းချက်တွေရှိပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုပါ။ ကား စီးတဲ့အခါ ခါးပတ် ပတ်ရင်လည်း သာသာယာယာပါပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွင်းခံလေးတွေကို ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သူလေးက လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ Gym…
ချစ်သူ တွေ ကြားမှာ ဘယ်တော့မှ မပြောသင့် တဲ့ စကား ( ၅ ) ခွန်း
ချစ်သူတွေကြားထဲမှာ ဒီစကားတွေ ခဏခဏ ပြောမိနေရင် မကောင်းပါဘူး။ သင်ဟာ အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦး၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူ ဘဝ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် စကား တွေကိုမပြောသင့်ပါဘူး။ တစ်ချို့ စကားတွေဟာ မပြောလိုက်တာက အနာဂတ်အတွက် ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။ ဒီစကားမျိုးတွေ ပြောလိုက်ပြီဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း တခန်းရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ၁။ နင် ဘယ်တော့မှ ပန်းကန်ဆေးမပေးဘူး။ အမြဲတမ်း အဲမှာ…
အိမ်ထောင်ရေး မှာ အိမ်အလုပ်တွေကို မိန်းမကပဲ လုပ်ရမှာလား
အိမ် အလုပ် ဆိုတာကတော့ ဘာလဲ ဆိုတာ လက်ညှိုး ထိုးပြရခက်ပေမယ့် လုပ်ရတာတော့ တတောက်တောက်နဲ့ တစ်နေကုန်လုပ်ရင်တောင် မပြီးနိုင်တာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်တော့ သိထားရမယ့် စည်းကမ်း တွေ လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို သိထား၊ လိုက်နာနိုင်မှ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ပိုပြီး သာယာဖို့ ဘာတွေကို ထိန်းချုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြထားပါတယ်နော်။ အခု တစ်ခေါက် ကတော့…
သီဟိုဠ်ကျွန်း (သို့)သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အကြောင်းသိကောင်းစရာ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ဒီမိုကရက်တစ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတသီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ဘက် ကမ်းလွန်ဒေသတွင်တည်ရှိသည်။ တောင်အာရှရှိ ယင်းကျွန်းနိုင်ငံအား ၁၉၇၂ မတိုင်မီတွင်ဆီလွန် (Ceylon) နိုင်ငံဟုခေါ်ခဲ့သည်။ သီရိလင်္ကာကို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၊ မန်နာပင်လယ်ကွေ့နှင့် ပေါ့(ခ်)ရေလက်ကြားတို့က ဝန်းရံထားပြီး အိန္ဒိယနှင့် မော်လဒိုက်နိုင်ငံအနီးတွင် တည်ရှိသည် ။ ပြာလဲ့ လဲ့ ပင်လယ်ရေပြင်ဖြင့် ဝိုင်းရံလျက်ရှိ၍ စိမ်းစိုသာယာလှပသော ရှုခင်းတို့ဖြင့် တင့်တယ်ရှုမောဖွယ် ရာဖြစ်သော သီဟိုဠ်ကျွန်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းလည်းဖြစ်သည်။…
Donald Trump Le Putin Emergency In Ton Bia Ruahnak An Ngei Than
Trump le Putin hna tonnak .American President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin hna cu Finland Ram Helsinki myo ah July 16 ah tonnak an ngei kho.Pehtlaihnak sawhsawhnak inafekdeuhmi pehtlaihnak cu Trump…
နာဆာက အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို လွှတ်တင်မယ့် မားဟယ်လီကော် ပတာ ပရောဂျက်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီး မမီမီအောင်ကဦးဆောင်
ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထက်စာရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံကသိပ်ထူးထူးထွေထွေ ဘာမှမရှိကြပေမယ့် ကျွန်မမတို့မြင်တွေ့ရတဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကတော့အတူတူပါပဲ။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးမှာ ဘာတွေများရှိနေမလဲ..နေစကြ၀ဠာ စသည်ဖြင့်ကဘာတွေရှိကြသလဲ..ဒီမေးခွန သလဲ.ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ကနေ့အထိပါပဲ။ သဘာဝနဲ့ပတ်သတ်လို့ သာမန်လူတွေမေးနေကြတဲ့မေးခွန်းတွေပါ။ ကျွန်မတို့လူသားတွေ ဘယ်ကစခဲ့ကြသလဲ။ ကျွန်မတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီးတစ်ခုတည်းသက်ရှိတွေ ရှိတာလား။ ဒီမေးခွန်းတွေကို ကျွန်မအတွက်သိပ်ကိုသိလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြလှပါတယ် ။ ဒါကတော့ နာဆာခေါ်အမေရိကန်အာကာသစူးစမ်း လေ့လာရေးက JPL လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့Jet Propulsion Laboratory ဌာနမှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလွှတ်တင်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ …
World News January 2, 2019
နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင်ပျေ်ာရွှင်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတစ်ချို့
သင့်ရဲ့ဘ၀မှာ သင်ဟာအမှားတွေဘယ်လောက်ပဲ လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့၊ သင်ဘယ်လောက်ပဲ အသက်ကြီးကြီး .. စသဖြင့် ..အဲဒါတွေက ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာနှစ်သစ်တစ်ခုနဲ့အတူ တစ်ဖန်ပြန်စနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဆန္ဒရှိနေသေးသရွေ့ သင့်ရဲ့ဘ၀ကိုပိုကောင်းအောင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ။ သင့်အတွက် သစ်လွင်လတ်ဆတ်တဲ့နှစ်သစ်တစ်နှစ်ဟာ ရှေ့မှာစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ၂၀၁၉ ဟာသင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပါပဲ။ ဒီစာဟာသင့်ရဲ့ စိတ်ကူးထဲကဘ၀တစ်ခုကို၂၀၁၉ နှစ်သစ်မှာ လက်တွေ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့နဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကို ပေးပါလိမ့်မယ် ။…